Tevedzera Yako Youtube Mavhidhiyo | Martech Zone
Vanhu vazhinji havazvizive, asi Youtube ine zvimwe zvakakosha analytics kuti iwe uteedzere mavhidhiyo ako. Kana iwe uchida kugona kuona kuti ndiani anovapinza uye mangani mitambo yavakawana, zviri nyore kushandisa YouTube Insight tool.
Kutanga, pinda muakaunti yako yeYouTube uye sarudza imwe yemavhidhiyo ako. Iwe uchaona iyo Insight bhatani padivi rerudyi:
Zvadaro, sarudza kuwanikidza uye iwe uchawana menyu yesarudzo:
sarudza Yakabatanidzwa Player uye iwe uchasangana nerunyorwa rwemasaiti ese vhidhiyo yakaiswa mukati uye kuti mangani maonere aakagashirwa ipapo:
Ichi chishandiso chakakura chemushambadzi! Kana saiti inotora imwe yemavhidhiyo mavhidhiyo, iyi inzira huru yekutevera kwete chete iwo masosi anofarira - asi iwo masosi anotakura imwe traffic. Iwe unogona zvakare kurodha aya manhamba kuburikidza ne CSV faira.
Tags: YouTubeyoutube analyticsyoutube kushambadzirayoutube metricsYouTube yekutevera
Jul 14, 2009 pa 3: 35 AM